Samsung inotsanangura kuti zviri nyore sei kushandisa Smart switchch kuendesa data kubva ku iPhone kuenda kune ako madhizaini IPhone nhau
Chaizvoizvo kune akati wandei masisitimu ekupfuudza iyo data kubva kune yedu Samsung chishandiso kuna Apple uye zvinopesana. Mazuva ano hazvina kuomesa kuendesa data kubva kune imwe kifaa kuenda kune imwe uye Samsung inowedzera kugadzirisa kune yayo Smart Shandura webhusaiti kune ratidza kuti zviri nyore sei kuendesa data kubva ku iPhone kuenda kune ako mafoni.
Chishandiso chavanoshandisa ndiSmart switch, iyo inotibvumidza kuteedzera data kubva ku iPhone kana chero chimwe chishandiso kuGirazi nekukurumidza uye nyore. Mune ino kesi, inofanirwa kujekeswa kuti kune maviri maBhaibheri eSmart switch: iyo komputa vhezheni Smart switch (inova ndiyo yavakavandudza) uye iyo vhezheni yemidziyo, Smart Chinja Nhare.
Zvine musoro mune iyo Samsung's webhusaiti Vanotiratidza zviri nyore zvekushandisa chishandiso chavo uye usakanganwa kutaura kune vashandisi vatinonakidzwa ne iPhone yedu kuti vataure kuti zviri nyore kwazvo kuita shanduko, chero zvisina waya, ine tambo yeUSB kana kubva kuMac kwedu. Icho chinhu chiri pachena chinogona kuitwa kwenguva yakareba, asi makwikwi acho anotyisa zvekuti vanoisa pfungwa pazvinhu zvese zvinogoneka kutora ruzhinji rwevashandisi kubva kune rumwe rutivi kana rumwe.
Chinhu chinoda kuziva ndechekuti vanotsanangura paSamsung webhusaiti kuti iko kushanda kunoshanda kubva kuIOS vhezheni 5 kana gare gare, asi mune iwo manotsi akafanana pazasi chaiko unogona kuverenga kuti inoenderana neIOS 9 kuburikidza neICloud, Saka chenjera kana tichizoishandisa, verenga rondedzero uye nesarudzo zvakanaka. Chero zvazvingaitika uye nezvikonzero zviri pachena tichagara tichikurudzira chishandiso chinoita zvinopesana, inobvumira vashandisi veApple kuchinjira kuIOS, iko kunyorera kunodaidzwa Enda kune iOS uye inowanikwa paGoogle Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Android » Samsung inotsanangura kuti zviri nyore sei kushandisa Smart switchch kuendesa data kubva ku iPhone kuenda kune ako mafaera